Prometheus In The New Age: အမေစု မွေးနေ့ ဟာ မြန်မာ အမျိုးသမီးများနေ့
“It cannot be doubted that
in most countries today women,
in comparison to men, still remain underprivileged.”
Nobel Peace Laureate & Ambassador of Conscience
We feel great sorrow and shocking whenever we think that the birthday of Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi cannot be celebrated freely in her motherland. It isagreat disgrace in the civilized world to realize thataNobel Peace Laureate has been without basic liberties for over two decades.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ကို “မြန်မာ အမျိုးသမီးများနေ့“ (Women of Burma Day) အဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မြန်မာများမှ တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သူမသည် လက်နက်အားကိုးဖြင့် မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေသော စစ်အာဏာရှင်တွေကို မကြောက်တရား စိတ်ဓါတ်ဖြင့် အကြမ်းမဖက် ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူမကိုယ်တိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးတရားကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ခံကျင့်သုံးနေသလို တခြားလူတွေကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးတရား နှင့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ကို လမ်းညွှန်ပြသနိုင်သူဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် သူမ၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်မှာ နှစ်အတော်ကြာနေပြီဆိုတာကို တွေးမိဆင်ခြင်မိတိုင်း တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ယခုလို မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ကျခြင်းခံနေခြင်းဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့ကမ္ဘာမှာ အင်မတန် အကျည်းတန်သော အကြောင်းအရင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါများဖြစ်ကြသော ဒီမိုဝေယံ၊ အလင်းဆက် နှင့် ခမိခဆဲ တို့၏ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ သဝဏ်လွာမှ.........
Posted by အလင်းဆက် at 10:38 PM